2917 macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee lacagta digital.
Sicirada sarrifka lacagaha oo casriyey 21/01/2020
Bangiga ugu qiimaha badan ee sanadka 2020. Suuqyada ugu dakhliga badan ee faa'iido u leh maalgashiga, lacagaha ugu kobcaya ee koraya si aad u iibsato hadda.
Ugu sareeya 10ka ugu badan ee lacagta la filayo, kuwaas oo koray qiimaha bishii hore.
Hantida lacagta badan ee faa'iido leh
Kobaca boqolkiiba hal bil
Bitcoin SV (BITCOINSV) 249.96 %
Dash (DASH) 154.45 %
Ethereum Classic (ETC) 115.17 %
Bitcoin Gold [Pre-Launch] (BITCOINGOLDPRELAUNCH) 114.34 %
Bitcoin Diamond [Futures] (BCD) 91.77 %
Zcash (ZEC) 87.52 %
Bitcoin Cash (BCH) 82.21 %
Horizen (HORIZEN) 62.65 %
IOTA (MIOTA) 55.88 %
EOS (EOS) 46.64 %
Baahiyaha ugu badan ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa adeegga websaydhka internetka ee loo yaqaan 'cryptoratesxe.com' oo muujinaya lacagaha ugu sarreeya ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' oo leh macaash ugu badan 3dii bilood ee la soo dhaafay.
Adeegga khadka tooska ah Inta badan lacagta dijitaalka ah oo rajo leh wuxuu adeegsadaa ilo furan oo laga helo isweydaarsiga lacagta digital wuxuuna isku daraa qiimeynta ballanqaadyada aaladaha lacagta marka loo eego maalgashiga waqtiga-dhabta ah.
Balanqaad yididiilo leh ayaa loo qaddariyo sidaas haddii ay muujiso koror xasilloon oo joogto ah heerka. Iyada oo ku saleysan dhaqdhaqaaqa isbeddelka, xasilloonida kobcitaankiisa iyo cabirka faa'iidada laga helay maalgashiga lacagta crypto, waxaan u uruurineynaa qiimeynta TOP.
Aaladaha lacagta ugu yabooha badan 2020
Waxyaabaha ugu ballanqaadyada badan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ee loogu talagalay 2020 waa adeegga websaydhka tooska ah ee internet-ka oo muujinaya ballanqaadyada aaladaha lacagta ee aadka loo ballanqaaday ee 2020.
Xulashada crypto ballanqaadku wuxuu ku dhacayaa 2020, laakiin waxaan qiimeyneynaa 3-dii bilood ee ugu dambeysay isbeddelka heerka sarrifka. Heerka sarrifka iyo dhaqdhaqaaqa firfircoonaanta ayaa isbeddela maalin walba sidaa darteedna qiimeynteena ugu sarreysa ee "Inta badan lacagta dijitaalka ah oo rajo leh 2020" ayaa is beddeli kara maalin kasta.
Korodhka aaladaha lacagta oo leh macaashka ugu badan.
Korodhka aaladaha lacagta oo leh macaashka ugu badan - tusaale muunad dhammaan aaladaha lacagta iyadoo loo eegayo dhaqdhaqaaqyadooda. Korodhka aaladaha lacagta oo leh macaashka ugu badan ayaa lagu falanqeeyay annaga oo isku duwaya darajada ugu sarreysa ee aaladaha lacagta ugu yabooha badan.
Waxaan go'aamineynaa faa'iidada crypto xilli xilli ah: isbeddelka sicirkooda seddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Faa'iidada ugu badan ee lacagta digital ayaa si fudud loo go'aamiyaa - intee in le'eg lacagta digital kasta ayaa kor ugu kacay qiimaha intii lagu jiray falanqaynta.
Macaashka ugu badan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' waa adeegeena, qiimeynta ugu sarreysa ee internetka ee aaladaha lacagta oo keena faa iidada ugu badan haddii aad iibsato oo aad iibiso waqti ka dib, sida ugu macaashka badan.
Sare ee faa'iidada ugu badan ee loo yaqaan 'crypto' waxaa lagu xisaabiyaa 3 bilood, laakiin waad ku falanqayn kartaa waqti kale.
'' Macaash faa'iido leh '' crypto 'waxaa lagu qiimeeyaa marka loo eego doollarka Mareykanka. Waxaan qiyaaseynaa inaan ku iibsaneyno crypto dollarka Mareykanka, iyo inyar ka dib waxaan ku iibinay doollar. Waa kuwee lacagta digital heli doonaa dakhliga ugu badan ee kiiskan waa faa'iidada ugu badan lacagta digital.
Jadwalka faa iidada ugu badan ee aaladaha lacagta.
Shaxda kuwa faa'iidada ugu badan leh ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' - muuqaal ahaan u soo bandhigaya qiimeynteena sare ee lacagta ugu faa'iidada badan ee loo yaqaan 'crypto'.
Miiska shaashadda ugu waxtarka badan waxaad ku arki kartaa magaca 'lacagta digital' iyo heerka koritaankiisa boqolkiiba inta bil ah.
Markaad gujiso mid ka mid ah faa'iidada ugu badan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ee miiska, waxaad arki doontaa koror faahfaahsan oo ku saabsan sicirka crypto this bishii la soo dhaafay.
Shaxda ah faa'iidada ugu badan ee aaladaha lacagta.
Shaxda ugu macaashka badan ee loo yaqaan 'lacagta digital chart' waa qalab kale oo bilaash ah oo internetka ah kaasoo soo bandhigaya darajada ugu sarreysa ee aaladaha lacagta ugu macaashka badan.
Shaxanka aaladaha lacagta ugu macaashka badan wuxuu muujinayaa dhaqdhaqaaqa qiimaha 10ka ugu sarreeya ee faa'iido-doonka ah.
Si loo fududeeyo fahamka, sawirada naqshadeynta cryptos kala duwan ayaa lagu soo bandhigaa midabbo kala duwan.